မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ရာသီလည်း မလာ၊ ကိုယ်ဝန် ရှိ မရှိ စမ်းကြည့်တော့လည်း မပေါ်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
ကိုယ်ဝန် ရှိ၊ မရှိ ဆီးစစ်ကိရိယာနဲ့ စမ်းတာ ဘာကြောင့် တစ်ကြောင်းပဲ ပေါ်ရသလဲ?
Author MSSK at 12:37:00 PM
Labels: ကျန်းမာရေး, အမျိူးသမီးရေးရာသိမှတ်စရာ, အိမ်ထောင်ရေး